Sajhasabal.com | Homeमोबाइल हरायो ? यस्तो छ फेला पार्ने र फोनका डाटा मेट्ने तरिका
मोबाइल हरायो ? यस्तो छ फेला पार्ने र फोनका डाटा मेट्ने तरिका
भदौ ८, काठमाडौं । आफ्नो फोन हराएको वा चोरिएको घटना हामीमध्ये धेरैले भोगेकै हुन्छौँं । कहिलेकाही घरमै कतै आफैं फोन राखिएको हुन्छ, तर खोजी गर्दा भेट्टाउनै गाह्रो पर्दछ । यस्तो अवस्थामा यदि तपाईंले उक्त स्मार्टफोनसँग paired गरेको स्मार्टवाचको Find My Phone फिचरबाट पनि फोन कतै लुकेको फोन फेला पार्न सक्नुहुन्छ । त्यस्तै यदि फोन साइलेन्समा छैन भने कसैलाई कल गर्न लगाएर रिङटोन बजेको आधारमा पनि घरभित्रको फोन फेला पार्न सकिन्छ ।
त्यस्तै तपाईंले फोनमा रहेका सबै डाटा डिलिट गर्नका लागि Erase Device अप्सन पनि छनोट गर्न सक्नुहुन्छ । यसो गर्दा तपाईंको हराएको फोनका सबै डाटा स्थायी रुपमै डिलिट हुन्छन् । त्यसपछि Find My Device फिचरले पनि काम गर्दैन । यदि तपाईंको फोनको स्वीच अफ गरिएको छ वा फोनमा डाटा वा वाइफाइ कनेक्ट छैन भने चाहिँ तपाईंले यसरी डाटा डिलिट गर्न सक्नुहुन्न । अनलाइनखबरबाट साभार